[Tuesday, March 6th, 18] :: Shir looga hadlayo gargaarka Soomaaliya oo London ka furmay
London (RH) Magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaa maanta oo Talaado ah ka furmay shir heer caalami ah oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya gaar ahaan khatar laga digay oo ku aadan in macluul ay ka dilaacdo Soomaaliya.
Dowladda Ingiriiska iyo hey’adda QM u qaabilsan isku arrimaha bini’aadinimada OCH ayaa shirkan si wadajir ah u martigaliyey waxaana ka qeybgalaya wafdi ka socda dowladda fedaraalka Soomaaliya, waddamada deeq bixiyaasha, hey’addaha ka shaqeeya gargaarka iyo Qaramada Midoobay.
Shirka ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa mashaakilaadka ka jira Soomaaliya oo abaaraha iyo colaadaha ay ka mid yihiin iyo sida loo adkeen kaaro guulaha laga gaaray arrimahaas sannadkii horre.
Wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Soomaaliya Danjire Jamaal Xasan oo ka mid ah wafdiga dowladda ee ka qeybgalaya shirka ayaa sheegay in dowladda ay uga mahadcelineyso waddamada deeqaha bixiya in ay ka soo qeybgalaan markale shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan abaaraha iyo macluusha.
Shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo shaley hey’adda NRC ee dalka Norway ay soo saartay warbixin ay uga digeyso in Soomaaliya laga yaabo in ay markale ay ka dilaacdo macuul.
Agaasimaha NRC ee gobalka geeska Afrika,Nigel Tricks ayaa ugu baaqay waddamada deeq bixiyaasha in ay ka jawaabaan digniintan ay dirreen.
‘’5.4 million Soomaali ah ayaa u baahan gargaar sannadkan.in ka badan 300,000 carruur da’dooda ay ka yartaahay shan sanno ayaa wajahaya macluul waxaa ku jira 48,000 oo khatar ugu jira in ay dhintaan,” ayaa lagu yiri warbixinta NRC.
Sida laga soo xigtay QM, 2.7 million oo qof ayaa maanta nolashooda lagu sifeeyay wax lagu sheegay xaalad degdeg ah oo cunto u baahan.
Haddaba, si loo wajaho xaaladaas abaarta iyo dib u dhiska dalka ku yaalla geeska Afrika waxa ay hey’addaha garkaarka ku baaqayaan in loo bahaan yahay $1.5 billion.
In ka badan 1.1 million oo Soomaali ah ayaa ka hayaamay guryahooda wax lagu sheegay abaar iyo dagaallo sannadkii la soo dhaafay, waxaa lagu darray hal milyan oo kale oo horrey gudaha dalka ugu barakacay dhowrkii sanno ee la soo dhaafay, sida lagu sheegay warbixinta NRC.
posted on Tuesday, March 6th, 18